अनुग्रह भन्दा बढीको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स अनुग्रह भन्दा बढीको लागि प्रार्थना अंकहरू
अनुग्रह भन्दा बढीको लागि प्रार्थना अंकहरू
आज हामी अधिक अनुग्रहको लागि प्रार्थना पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। जब तपाईले यो शब्द सुन्नुहुन्छ अनुग्रह भन्दा बढी के दिमागमा आउँछ? बढि अनुग्रहलाई चमत्कारी अनुग्रह भन्न सकिन्छ। भगवानको योजना मा, केहि स्तरहरु छन्। अनुग्रहको पनि स्तरहरू हुन्छन्। अनुग्रह भन्दा माथि जान्नु भनेको अलौकिक चीज हो, जुन अकल्पनीय छैन, जुन कुनै मानिसको ज्ञानको माध्यमबाट वर्णन गर्न सकिदैन।
अनुग्रह भनेको मानिसजातिलाई दिइएको परमेश्वरको वरदान हो। यसको अर्थ परमेश्वरबाट पाएको अपार आनंदको पनि हुन सक्छ। भगवान्को असीम अनुग्रह यस्तो उपहार हो जुन कुनै सीमा वा सीमितताहरू जान्दैन। हामी अनुग्रहको युगमा बाँचिरहेका छौं र जीवनमा महानताको लागि, परमेश्वरको अनुग्रहलाई अत्यन्त आवश्यक छ। हामीलाई पृथ्वीमा ठूलो शोषण गर्न हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। यो उमेर हो जब जीवनमा अनुग्रहको अत्यधिक आवश्यकता हुन्छ।
को पुस्तक एफिसी २: so ताकि आउने युगहरूमा उहाँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति दयालु हुँदै आफ्नो अनुग्रहको उत्कृष्ट सम्पत्ति देखाउन सकौं। कि उसले आफ्नो अनुग्रहको उत्कृष्ट धन देखाउँनेछ। धर्मशास्त्रले बुझ्दछ कि जीवनमा यस्तो समय आउँदैछ कि कुनै कुराले अब गणना गर्दैन, डिग्री योग्यता, सामाजिक स्थिति, उमेर, भाषा वा संस्कृति अब केहि चीजको लागि मिल्दैन, केवल परमेश्वरको अनुग्रहले मानिसहरूलाई अलग गर्दछ।
अब्राहामले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहको आनन्द उठाए। कसरी कि एक नश्वर मानिस परमेश्वरको मित्र बन्न सक्छ र भगवान उसलाई के हुनेछ केहि पनि बताउन थियो। जब परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्न चाहानुहुन्छ, तब अब्राहमले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा सदोमका मानिसहरूका लागि परमेश्वरका योजनाहरू बताउँथे।
त्यस्तै नूहले पनि परमेश्वरको नजरमा अनुग्रह पाए। को पुस्तक उत्पत्ति 6:9नूहले एलको आँखामा अनुग्रह पाएओआरडी। " तिनीहरूको हृदयमा दुष्टताले गर्दा परमेश्वरले पृथ्वीको सतहमा मानिसलाई नष्ट गर्नुभयो। तर अनुग्रहले नूह र उसका मानिसहरूलाई परमेश्वरको क्रोधबाट बचायो।
धेरै जसो मानिसहरू अनुग्रह वा कसरी पाउने भन्ने बारे गलत धारणा हुन्छन्। जोडको उद्देश्यको लागि, अनुग्रहको बारेमा केहि गलतफहमीहरू सूचीबद्ध गरौं।
अनुग्रहको प्रयास मानिसद्वारा गरिएको हो
यो अनुग्रह ल्याउने मानिसको प्रयास होइन। धर्मशास्त्रले भन्छ कि यो मानिस जसले ईच्छ गर्छ, र दगुर्छ, त्यो मात्र होइन तर दया देखाउने परमेश्वरबाट हो। बलले कुनै मानिस विजयी हुन सक्दैन। भगवानको अनुग्रह मानिसमा परमेश्वरको असीमित उपहार हो।
कहिलेकाँही हामी महसुस गर्दछौं कि केही व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा ईश्वरीय आशिष वा उपहारको योग्यता पाउँदैनन् किनकि हामी महसुस गर्छौं कि हामी उनीहरू भन्दा राम्रो छौं। कसले आफ्नो अनुग्रह कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न परमेश्वर सामर्थ्यमा हुनुहुन्छ।
अनुग्रह धार्मिकतामा आधारित छैन
धर्मशास्त्रले हामीलाई यो बुझाउँदछ कि हाम्रो धार्मिकता परमेश्वरसामु फोहर राग जस्तो छ। हामी कमाउँदैनौं अनुग्रह हाम्रो धार्मिकताका कामहरूद्वारा। यदि परमेश्वरले पाप बनाउनुहुन्छ भने, को खडा हुन सक्छ र?
भगवान् ग्रेस एक अप्रमाणित आशिष् हो, यसको मतलब यो हो कि तपाइँ यसको लायक हुनुहुन्न न त तपाईं यसको लागि काम गर्नुभयो।
कसरी परमेश्वरको अनुग्रहमा काम गर्ने
क्रसको करारमा कुञ्जी
ख्रीष्ट केवल क्रूसमा मर्नु भएन, त्यहाँ एउटा करार बाँधियो जुन ख्रीष्टको मृत्युको साथ गरिएको थियो। क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युले अनुग्रह ल्यायो। को पुस्तक रोमी 6: 14 किनकि पापले तपाईमाथि प्रभुत्व जमाउनेछैन, किनकि तपाईं व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर अनुग्रहको अधीनमा हुनुहुन्छ। कलवरीको क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युको कारणले गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो लागि पर्याप्त भयो।
प्रभु येशू, म तपाईंलाई मर्न दिन आएको येशू ख्रीष्टको उपहारको लागि धन्यवाद दिन्छु, व्यवस्थाको श्रापमा मलाई बचाउनुभएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईंको छोरा येशू ख्रीष्टको अद्भुत रगतको लागि धन्यवाद दिन्छु जसले अनुग्रहको नयाँ करार ल्यायो , तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
एफिसस १: Lord का प्रभु परमेश्वर, उहाँमा हामी उहाँकै रगतबाट छुटकारा पाउन सक्छौं, उहाँको अनुग्रहको धनसम्पत्तिका आधारमा हाम्रा अपराधहरूको क्षमा। बुबा, म येशू ख्रीष्टको अनमोल रगतको पाप र पापहरूका लागि क्षमा चाहन्छु। म प्रार्थना गर्दछु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अनुग्रहले मेरा सबै पापहरू येशूको नाममा हटाइनेछ।
प्रभु, म तपाईंको जीवनमा तपाईंको अत्यधिक अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले मलाई धेरै मानिसहरू माझ भेला पार्नेछ। धेरै हिब्रू बीचमा तीन हिब्रूहरूको मर्यादा कि अनुग्रह, म यस्तो अनुग्रह येशूको नाम मा मेरो जीवन मा काम गर्न सुरु भनेर प्रार्थना गर्दछु।
धर्मशास्त्रमा भनिएको छ र एस्तरले उनलाई सबै मन पराउँछन्। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु, मेरो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह येशूको नाममा सक्रिय छ। प्रभु, प्रत्येक पुरुष र महिलाले येशूको नाममा मलाई अनुमोदन गर्न शुरू गर्नेछन्।
धर्मशास्त्रले भन्छ यदि कोही बोल्छ भने, उसले आफुलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा बोल्नु पर्छ। प्रभु मेरो विरुद्धमा बन्द छ कि हरेक ढोका, म आदेश दिन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहले येशूको नाममा तिनीहरूलाई खोल्न शुरू गर्दछ। आज यहोवा परमेश्वरको अनुग्रह मेरो सामुन्ने जान्छ र येशूको नाममा हरेक असफल मार्गलाई सहज बनाउँदछ।
प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रहको कारणले म आदेश दिँदछु, म अस्वीकार गरिएका सबै ठाउँमा म उत्सव मनाउनेछु। उत्कृष्टताको अनुग्रहले येशूको नाममा पृथ्वीको हरेक कुनामा मलाई महानताको लागि घोषणा गर्न सुरू गरौं।
हे परमेश्वर, म स्वर्गको अधिकारबाट आज्ञा गर्दछु, कि आज देखि मैले आफ्नो हातमा राखेका प्रत्येक चीज सफल हुनेछ। ख्रीष्टको अत्यधिक अनुग्रहले कार्यमा मेरा सबै त्रुटिहरू रद्द गर्दछ। जहाँसुकै ठाउँमा पनि सजाय मेरो लागि प्रतिक्षा गरिरहन्छ, अनुग्रह येशूको नाममा बोलेको होस्।
प्रभु येशू, अनुग्रहको प्रकार जुन दानियलले आफ्ना समकालीनहरू सबै भन्दा भिन्न थियो, म प्रार्थना गर्दछु कि येशूको नाममा त्यस्तो अनुग्रहले आज मेरो जीवनमा काम गरोस्। अनुग्रहले मलाई उत्कृष्टताको लागि अलग राख्दछ, म आज येशूको नाममा यसलाई सक्रिय गर्दछु.
अनुग्रह भन्दा बढी
अघिल्लो लेखमाईस्टरका लागि प्रार्थना पोइन्टहरू (पुन: निर्धारण)
अर्को लेखमाWAEC परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू